तथ्य जाँच: के खानामा मरीच प्रयोग गरेर तपाई कोभिड-१९ बाट जोगिन सक्नुहुनेछ? - THIP Media
Home तथ्य जांच - Nepali तथ्य जाँच: के खानामा मरीच प्रयोग गरेर तपाई कोभिड-१९ बाट जोगिन सक्नुहुनेछ?
एउटा ह्वाट्सएप सन्देशमा दाबी गरिएको छ कि कोभिड – १९ बिरामीलाई मरीच खुवाएर निको पार्न सकिन्छ। हामीले यस ’boutमा छानबिन गरेर उक्त दाबीको समर्थन गर्ने कुनै पनि वैज्ञानिक प्रमाणहरू नरहेको कुरा पत्ता लगायौ। हामी यस दाबीलाई झूटो मान्दछौ।
प्रमाणीकरणको लागि हाम्रा एक पाठकले हामीलाई पठाएको एउटा ह्वाट्सएप सन्देशमा मरीच द्वारा कोभिड – १९ बिरामीहरूलाई निको पार्न सकिन्छ भनेर दाबी गरिएको छ।
के मरीच द्वारा कोभिड – १९ को उपचार गर्न सकिन्छ?
मरीचलाई महामारीको बेला अनेकौँ पटक कोभिड – १९ को उपचार को रूपमा दाबी गरिएको छ। यो समय समयमा तथ्य जाँच कर्ता द्वारा खण्डन गरिएको छ।
हामीले केहि दिन अघि यस्तै मरीच, अदुवा र महलाई कोभिड – १९ को उपचारको रूपमा गलत रूपमा गरिएको दाबीको तथ्य जाँच गरेका थियौ।
कोभिड – १९ को विरुद्ध प्रभावकारिताका लागि धेरै प्राकृतिक सामग्रीहरू र तिनीहरूका मिश्रण को परीक्षण गरिएको छ तर कुनै पनि निर्णायक परिणाम अझै देखा परेको छैन। भारतीय आयुष मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि प्रतिरोधात्मक क्षमता सुधार गर्न मरीच युक्त धेरै प्राकृतिक सामग्री र मिश्रणको सिफारिस गरेको छ तर यस रोगको उपचारको रूपमा कुनै दाबी गरिएको छैन।
के मरीच आफैमा स्वस्थवर्द्धक हुन्छ?
मरीचमा रोगाणुरोधक गुणहरू रहेको कुरा प्रमाणित भएको छ। २०१५ मा प्रकाशित एक अनुसन्धानको अनुसार मरीच को रसले कथित रूपमा खाना खराब पार्ने र खानालाई रोगजनक बनाउने जीवाणुलाई रोक्छ।
मरीचलाई शरीरमा स्वस्थ लिपिड प्रोफाइल कायम राख्न मद्दत गर्ने एंटीओक्सिडेंटको रूपमा र मसलाको रूपमा यसको प्रभावकारिता स्थापित गर्ने अनेकौँ शोधहरू गरिएका छन्।
Previous articleजापानी मून मेलन: अस्तित्व नै नरहेको निलो तरबुजो
Next articleतथ्य जाँच: के विश्व स्वास्थ्य संगठनले ७ वटा दिमागलाई क्षति पुर्याउने बानीको एक सूची जारी गरेको छ?